कोरोना भाइरसले शरीरमा कसरी हानी पुर्‍याउँछ ? « Bikas Times
कोरोना भाइरसले शरीरमा कसरी हानी पुर्‍याउँछ ?
चीनको वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरस (कोविड १९) ले २६ वटा भन्दा धेरै देशहरुमा आतंक मच्चाएको छ । हरेक दिन मानिसहरु यो खतरनाक भाइरसको चपेटामा आइरहेका छन् । भाइरसबाट संक्रमित मानिसहरुको मृत्यु हुने क्रम बढ्दै गएको छ । भाइरसलाई गम्भीरता पूर्वक लिँदै विश्व स्वास्थ्य संगठनले संसारभरीमा स्वास्थ्य आपतकालीन घोषण गरेको छ ।
यो भाइरसका कारण मर्नेहरुको संख्या १,८८६ भन्दा धेरै भएको छ । सबैभन्दा धेरै मानिसहरु चीनमा मरेका छन् । चीन बाहिर कोविड १९ भाइरसले पाँच जना मानिसहरुको मृत्यु भएको छ । भाइरसबाट संक्रमित मानिसहरुको संख्या ७३,३२५ भन्दा धेरै भएको छ । कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि शरीको अंगहरु कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा केहि जानकारीहरु निम्न प्रकार छ ।
फोक्सोलाई यसरी पुर्‍याउँछ हानी
कोविड १९ भाइरसबाट संक्रमित बिरामीहरुको प्रायः फोक्सो बिग्रन्छ । फ्लू जस्तै कोरोना भाइरस पनि सास सम्बन्धि रोग हो । यो भाइरस त्यस समयमा फैलन्छ, जब यो भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिले खोक्ने अथवा हाछ्यूँ गर्छ । यो रोगको विरामीसंगको नजिकको सम्पर्कमा आउँदा पनि यो भाइरसले प्रभावित गर्छ । यसको लक्षण पनि फ्लूको लक्षण जस्तै हुन्छ । यसमा ज्वरो आउने र सास फेर्न गाह्रो हुनुको साथै टाउको पनि भारी भएको महसुस हुन्छ । यही प्रकारको लक्षण निमोनियामा पनि हुन्छ ।
कोरोना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिको फोक्सोलाई तीन चरणहरुमा चपेटामा लिन्छ ।
-भाइरल रिप्लिकेशन (भाइरलको रुपमा)
-इम्यून हाइपर (रिएक्टिविटी-प्रतिरक्षाको उच्चता)
-पल्मनेरी डिस्ट्रेक्शन (फोक्सोको विनाश हुने)
तर कोरोनाबाट संक्रमित सबै विरामी यी तीन चरणहरुबाट पार हुँदैनन् । २५ प्रतिशत मानिसहरुको शरीरमा अक्सिजनको कमी हुन्छ र सास रोकिन्छ । ८२ प्रतिशत कोविड १९ बाट संक्रमित विरामीहरु गम्भिर स्थितिमा पुग्छन् । तुरुन्त मृत्यु भने हुँदैन ।
जसरी निमानियाले दुवै फोक्सोलाई संक्रमित गर्छ, त्यसरी कोरोना भाइरसले पनि दुवै फोक्सोलाई आफ्नो चपेटामा लिन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ । फोक्सो संगसंगै हाम्रो शरीरको प्रतिरक्षा कोशिकाहरु पनि मर्न थाल्छन् । कोरोना भाइरसले इबोला र फ्लू भन्दा धेरै तिव्र गतिले फोक्सोलाई हानी पुर्‍याउँछ र फोक्सामा क्षति पुग्ुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोनाले बिरामीको फोक्सोमा प्वाल पारिदिन्छ । कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेहरुमा प्रायः जसोको फोक्सोमा अक्सिजन नपुग्नाले सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, जसका कारण मृत्यु भएको हुन्छ ।
कसरी कोरोनाले पेटमा हानी गर्छ ?
सार्स र मर्स आउटब्रेकको क्रममा प्रायः बिरामीहरुलाई पातलो दिशाको समस्या देखिएको थियो । वैज्ञानिकहरु भन्छन् -‘कोरोना भाइरस ग्यास्टिक बढाउनमा कतिको महत्वपूर्ण भुमिका निभाउँछन भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन ।’
कोरोनाका नयाँ केशहरुमा पातलो दिशा हुने र पेट दुख्ने समस्याहरु कम नै देखिएको छ । कोरोना भाइरस जब कुनै व्यक्तिको शरीरमा प्रवेश गर्छ, तब यसले शरीरको कोशिकाहरुलाई नष्ट गर्न थाल्छ । यसले शरीरको कोशिकाहरुमा तिव्र गतिमा आक्रमण गर्न थाल्छ र टिश्युहरुलाई पनि निस्क्रिय गरिदिन्छ ।
सार्स र मर्सको भाइरसले विरामीको अन्द्रालाई पंक्तिबद्ध गर्ने कोशिकाहरुलाई क्षति पुर्‍याउने भएकाले बिरामीलाई पातलो दिशा लाग्ने समस्या हुन्छ । तर कोविड १९ ले पनि यस्तो समस्या उत्पन्न गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने बारेमा अहिले स्पष्ट भएको छैन ।
कोरोना भाइरस शरीरको शरीरको अन्य तन्त्रहरुलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । मर्सको ९२ प्रतिशत विरामीहरुमा फोक्सो बाहेक शरीरको अन्य अंगहरुमा पनि प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा सन् २०१४ मा भएको एउटा सर्वेक्षणमा भनिएको थियो । यस्तो प्रभाव सम्पूर्ण शरीरमा हुन सक्छ । कोरोना भाइरसका कारण लिभर पनि नष्ट हुन सक्छ ।
नक्कली किट किनेर कसरी पारियो सात करोडभन्दा बढि झ्वाम
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट चीनबाट खरिद गरेका स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण मध्ये
महासघका उपाध्यक्ष पोखरेलले दिए छ बुदामा प्रधानमन्त्री ओलिलाई कडा जवाफ
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले नेपाली मिडिया जगतलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान वैशाख १८ गतेसम्म बन्द गर्ने निर्णय
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई वैशाख १८ गते (अप्रिल ३०) सम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ
संकटका बेलामा सरकारलाई पूर्ण सहयोग नेपाली कांग्रेस पदाधिकारी बैठकको निर्णय
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठकले संकटका बेलामा मानविय भावनाले